Maxkamadda ciidamada oo xukun ku riday 3 ruux oo lala xiriiriyay ka mid ahaanshaha Al Shabaab. – Banaadir Times
By banaadir 29th December 2020 50 No comment
Maxkamadda ciidamadda Soomaaliya ayaa Talaadada maanta ah soo gabagabeysay galdacwadeed ka dhan ah saddex eedeysane oo lala xiriiriyey in ay ka tirsanaayeen xoogga hubaysan ee Al-Shabaab. ”
“Deeqo Maxamed Qeyliye Sabriye, Cabdikariim Maxamuud Cusmaan iyo Maxamed Siid Cali Maxamuud ayaa loo xiray July 19-keedii la shaqeynta AlShabaab iyo in ay ahaayeen koox wada degan oo ka shaqeysa Gudbinta iyo Keydinta Agabka Ciidan ee loo adeegsado dilalka gaadmada ah ee kooxdu ku wax yeeleyso dadka Soomaaliyeed,” ayay maxkamadu ku tiri qoraal ay soo saartay maanta oo Talaado ah.
28-kii November ayay bilaabatay Maxkamadeynta Deeqo Maxamed Qeyliye Sabriye, Cabdikariim Maxamuud Cusmaan iyo Maxamed Siid Cali Maxamuud, iyada oo Deeqo Maxamed Qeyliye ay sheegtay in ay Alshabaab kaga biirtay gobolka Shabeellada Hoose 2016-kii sada maxkamadu sheegtay.
“2016 ilaa July Sanadkan waxa ay marti gelisay Nimankii ugu badnaa ee AlShabaab u fulinayay howlahooda Gurracan mana jirin mid kamid ah oo xarig Alle kula joogay Guriga ay Argagixisada ugu kireysay Fulinta danahooda,” ayay maxkamadu ku dartay war-saxaafadeedka.
Cabdikariim iyo Maxamed Siid oo dhankooda Al Shabaab ku biiray 2016-kii ayaa, sidda ku cad qoraalka maxkamadda ciidamadda Soomaaliya, shaqadoodu ahayd sameynta qaraxyadda.
“Labada Eedeysane oo ku dhaawacmay Qarax uu aasayay dhagar qabe kale oo iyaga la socday July 2020 degmada Yaaqshiid gaar ahaan SOS ayay Ciidama Amniga ku soo qabteen, waxa ayna sahashay Farsamada kale ee dhalisay in la soo Gacan geliyo Deeqo Maxamed oo u aheyd Horjooge u sameysan Hooyanimo & Oori,” ayay maxkamadda ku dartey qoraalka ay soo saartey.
Maanta oo talaado ah ayay Maxkamadda Go’aan ka soo saartay sedaxdan shaqsi, waxaana lagu kala xukumay Deeqo Maxamed Qeyliye Sabriye 15-sano Xabsi Ciidan ah , Cabdikariim Maxamuud Cusmaan 3-sano Cabsi Ciidan ah iyo Maxamed Siid Cali Maxamuud 20-sano oo xarig ah, sida uu u sheegay guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad Ee Ciidamada Qalbka Sida Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute.
Dagaal markale ka dhacay degaano ka tirsan Galgafduud